» कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? यसो गर्नुहोस्
कपाल झरेर दिक्क हुनुभएको छ ? यसो गर्नुहोस्
२०७५, ९ जेष्ठ बुधबार २०:०५
एजेन्सी, ९ जेठ । हामी मध्ये धेरैलाई कपाल झर्ने समस्याले दिक्क बनाएको कुरा सबैलाई थाहा नै छ । युवा अवस्थामा नै धेरै जसो युवायुवतीको कपाल झर्न थालेपछि त्यसले पिडा समेत गराउँछ । उनीहरु विभिन्न माध्यमहरुबाट कपाल झर्न रोक्ने उपाय खोज्न थाल्छन् । यदि तपाईको पनि कपाल झर्ने गरेको छ भने तपाईले पहिले यी कुराहरु बुझ्नु जरुरी छ ।
कसरी रोक्ने त ? यी उपायहरु अपनाउनुहोस्
–नियमित तेल लगाउनुस्
नियमितरुपमा तेल लगाउनाले कपालको मोइस्चर कायम रहन्छ । तेललाई अलिकति तताएर पनि लगाउन सकिन्छ ताकि तेलले कपालको जरालाई राम्ररी अँठ्याउन सकोस् । तेल लगाएर १५ मिनेटसम्म हल्का हातले मसाज गर्नुस् ।
–सही सेम्पुको छनोट
आफ्नो कपालको प्रकृतिअनुसार सही सेम्पुको छनोट गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । सेम्पुलाई सोझै कपालमा दल्नुको साटो त्यसलाई थोरै पानीमा मिसाएर पहिले डाइल्यूट गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अत्यधिक सेम्पुको प्रयोगले पनि कपाल कमजोर भएर र्झन थाल्छ । सल्फेट र प्याराबिन मुक्त सेम्पुको छनोट गर्नुसु ।
–कपाललाई गहिराईदेखि कन्डिसन गर्नुस
कुनै खास मौकामा मात्र कपाललाई कन्डिसन गरेर तपाईंको कपाल स्वस्थ हुन सक्दैन । हरेक पटक कपाल धोएपछि कन्डिसन गर्नुस् । कन्डिसनर लगाउनुभन्दा अगाडि कपाललाई तौलियाले राम्ररी पुछ्नुस् । महिनामा एक पटक घरमा तयार गरिएको हेयर प्याकले पनि कपाललाई कन्डिसन गर्नुस् ।
–तातोपानी प्रयोग नगर्नुस्
तातो पानीले कपाल डिहाइड्रेटेड हुन्छ र टुक्रिन थाल्छ । त्यसैले कपाल धुनका लागि तातो पानीको प्रयोग सकभर नगर्नुस् । कोठाको तापमान वा त्यसभन्दा अलिकति चिसो पानी प्रयोग गर्नु सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ ।
–सागपात र फलफुलको सेवन
आफ्नो खानामा प्रोटिन र आइरनयुक्त खाद्यपदार्थ समावेश गर्नुस् । हरियो पत्तेदार सागपात, किसमिस, अन्डा, ब्रोकाउली, दही, बदाम इत्यादिको सेवन गर्नुस् ।
–तनावबाट मुक्त रहनुस्
धेरै तनाव लिने व्यक्तिहरुको कपाल झर्नुका साथै चाँडै फुल्छ पनि । यसले कपालको वृद्धिमा पनि नकारात्मक असर पुर्याउँछ । त्यसैले औषधि र योगले आफ्नो तनाव कम गर्नुस् ।
–चिसो कपाल नकोर्नुस्
चिसो कपाल अत्यन्तै कमजोर हुन्छ । त्यो एकदम छिटो टुक्रिन सक्छ । त्यसैले चिसो कपालमा काँइयो नदौडाउनुस् । यसका साथै प्लास्टिक वा पातलो दाँतवाला काँइयोले पनि कपालमा नोक्सानी पुर्याउँछ । कलाललाई हावामा सुक्न दिनुस् र मोटो दाँत भएको काँइयोले कोर्नुस् ।
–कपाललाई बाँधेर नराख्नुस्
कपाललाई कसिलो गरी बाँधेर राख्यो भने चाँडै टुट्न थाल्छ । यसले चाया पर्ने र चिलाउने समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले कपाल सकेसम्म खुल्ला नै छोड्नुहोस्, अन्यथा खुकुलो गरी बाँध्नुहोस् । हेयरब्यान्ड, स्कार्फले कपाललाई लामो समयसम्म ढाकेर राख्यो भने पनि घर्षणले गर्दा कपाल टुट्न सक्छ ।
–स्टाइलिङ प्रोडक्टको प्रयोगमा सतर्कता
हेयर स्टाइलिङ प्रोडक्ट, जस्तै जेल, क्रिम आदिले कपाललाई नोक्सान पुर्याउँन सक्छ । यिनीहरुको प्रयोगपश्चात कपाललाई राम्ररी धुन नभुल्नुस । अन्यथा यी वस्तु कपालको छालामा टाँसिएर रहन्छन् र कपालको वृद्धिलाई अवरोध पुर्याउँछन् ।
– कपाल छाँट्नुस्
कपाललाई नियमितरुपमा ट्रिम गर्नाले कपालका टुप्पोलाई पुग्ने क्षति कम गर्न सकिन्छ । हरेक प्रकृतिका कपालको ट्रिम गर्ने समयावधि अलग अलग हुन्छ । आमरुपमा चारदेखि ६ महिनामा कपाल ट्रिम गर्नुपर्छ । यसले कपालको हाँगा फाटेर रुखो हुँदैन ।
पार्टी निर्णय लत्याएर किन अस्पताल अध्यक्ष नियुक्त गरे सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले ?